အသေးစားငါးဂိမ်း Phoenix မြို့ - အမြတ်အစွန်းငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီရို.
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » အသေးစားငါးဂိမ်း Phoenix မြို့
အသေးစားငါးဂိမ်း Phoenix မြို့
474K display screen မှာ
6 ထိုင်ခုံ multiplayer setup ကို
ဒင်္ဂါးပြားမှထွက် / ဒင်္ဂါးပြား , အကြွေစေ့ / လက်မှတ်ပြန်ယူခြင်း, ဘီလ် Acceptor / အပူပရင်တာ, Cashless Card စနစ်
လွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်ရန် Plug And Play
12 လအတွင်းအာမခံ / တစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ကစားနည်း 8 ကစားသမား Ocean King ငါးဂိမ်းစက်
၏အစိတ်အပိုင်းများ 8 Ocean King ကစားသမားများ ငါးဂိမ်းစက် ပါဝင်သည်:
တည်ငြိမ်မှုကိုပရိုဂရမ် PCB အဓိကဘုတ်အဖွဲ့. ရရှိနိုင်ရွေးချယ်မှု Connector ကို: VGA, DVI, HDMI. ဆန့်ကျင်- Cheater ငါ / O ဘုတ်အဖွဲ့. အသိဉာဏ်ဒီကုဒ်ဒါ
အိုင်စီဘီလ်လက်ခံသူသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်အလုပ်လုပ်သည် 1-100, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အခြားအမျိုးအစားဥပဒေကြမ်းလက်ခံ: ICT ကလူ, TK စီးရီးအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်
Mutha Goose နှင့် Gaggle စနစ်, ငွေထုတ်ကတ်စနစ်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်
လေးလံသောတာဝန်, တာရှည်ခံဘုတ်အဖွဲ့အစွန်း connectors
4. Joystick & ခလုတ်များ
ABS ပလပ်စတစ်နှင့်အစိုင်အခဲအလွိုင်းဆောက်လုပ်ရေး. အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဆောက်လုပ်ရေး
စင်တာသို့နွေ ဦး ပြန်လာ. အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
optical Clarity အတွက် Polycarbonate မှန်ဘီလူး ဦး ထုပ်. အပူခုခံပလပ်စတစ်
Micro-switch သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအား10,000,000 Cycles သို့စစ်ဆေးသည်
ကvailable ဂိမ်းs အတွက် ငါးဂိမ်းစက်
1. Topgame software ကို R ကို&: D နှင့်တရုတ် manufacturingin
2. Customghigh အမြတ်အစွန်း software ကိုကိုင်ပြီး
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များသည်ထူးခြားသောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်, လှပသောရုပ်ပုံ, တောက်ပသောအသွင်အပြင်, ပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ,စိတ်ချရသောဟာ့ဒ်ဝဲ, တည်ငြိမ်သောဝင်ငွေ, အသစ်နှင့်အချိန်မီ update ကို
Q1: Product အာမခံ ?
က: ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနောက်ကွယ်တွင်ရပ်တည်ပြီးထုတ်လုပ်သူ၏ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်ချွတ်ယွင်းသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုပြန်လည်ပြုပြင်မည်. အာမခံမေးခွန်းများနှင့်အတူနည်းပညာပံ့ပိုးမှုဆက်သွယ်သောအခါ, ကျေးဇူးပြု၍ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနံပါတ်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီး ၀ ယ်ရက်စွဲကိုအတည်ပြုနိုင်ပါပြီ.
အဆိုပါဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့: 12 ဝယ်ယူသည့် နေ့မှစ၍ တစ်လအာမခံ.
က: ဟုတ်တယ်, သင်လုပ်နိုင်သည်! TAS သည်ဂိမ်း / ကက်ဘိနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်. ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုပေးပါ. ဖွံ့ဖြိုးမှုရွေးချယ်စရာများနှင့်ဆက်စပ်နိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက်ရှိပါတယ်.
က: ယေဘူယျအားဖြင့် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်ဖြစ်သည်(ဂိမ်းပစ္စည်းများ / အစိတ်အပိုင်းများ)/5~ ၇ ရက်(ဂိမ်းဗီရို) ကုန်ပစ္စည်းများစတော့ရှယ်ယာ၌ရှိကြ၏လျှင်. ကုန်ပစ္စည်းများစတော့ရှယ်ယာမပါလျှင်သို့မဟုတ်ပါက5~7ရက်ဖြစ်သည်, ကအရေအတွက်အရသိရသည်.
Q4: ၂၀ ပေတစ်စီးဖြင့်မည်မျှယူဆောင်နိုင်သည်, 40ပေနှင့် 45ft ကွန်တိန်နာ ?
က: ယေဘုယျအားဖြင့် 20ft: 6pcs . 40ပေ: 14pcs , 45ပေ: 18pcs. သင် joystick ဖယ်ရှားပစ်ရန်လက်ခံနိုင်လျှင်, ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိပြီးနောက်ပြန် install လုပ်ပါ, ကပိုပြီးဗီရို load နိုင်ပါလိမ့်မည်.
က: မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနီးပါးကိုက်ညီရန်ကစားနည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားပေးဗီရိုအချို့ပါဝင်သည် 2/4/6/8/10 ကစားသမားများ.
ငါးဖမ်းဂိမ်း Mahcine, ဂိမ်းစက်
ကာစီနို slot ကငါးဖမ်းဂိမ်းစက်
မီး Kirin ငါးဖမ်းဂိမ်းစက်
3 Ocean King ကစားသမားများ3ငါးဖမ်းဂိမ်းစက်
ဒင်္ဂါးပြားမှငါးဖမ်းဂိမ်းစက်ပင်လယ်ပင်လယ်ပရဒိသုလည်ပတ်သည်2Plus အား
E-mail ကို: xgame99online@163.com